प्रेम के हो ? यो हेर्नुस्, यति महान महिलालाई सबैले सम्मान र सहयोग गरेों – Tufan Media News
प्रेम के हो ? यो हेर्नुस्, यति महान महिलालाई सबैले सम्मान र सहयोग गरेों
२२ चैत्र २०७७, आईतवार १३:३१
काठमाडौ । सर्लाहीकी सरस्वती कोइराला कक्षा १० मा पढेदा १८ वर्षकी थिइन् । उनको परिचय अशोक उप्रेती नामका ट्रक ड्राइभरसंग चिनजान भयो । अशोक अभिभावक विहिन थिए । भेटघाट भएपछि अशोकले सरस्वतीको मोवाइल नम्बर फेला पारे । त्यसपछि उनले सरस्वतीलाई दिनहुँ फोन गर्न थाले । त्यस पछि दुवैको प्रेम बस्यो । तर सरस्वतीसंग विवाह गर्दा अशोक अस्वस्थ्य थिए । त्यो कुरा सरस्वतीलाई थाहा थिएन । उनले आफ्नो हजुरवुवावाट ११ वर्ष अघि म्रिगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । विवाह भएको ३ वर्ष अघि उनले म्रिगौला प्रत्यारोपण गराएका थिए ।